Akụkọ - Embroidery bụ okwu a na-akpọkarị maka ụdị ọ bụla eji achọ mma nke eji akwa ekike na eri na eri.
Ihe eji achọ mma bụ okwu a na-akpọkarị ụdị akwa eji achọ mma na agịga na eri.
Ihe eji achọ mma bụ okwu a na-akpọkarị ụdị uwe eji achọ mma na agịga na eri.
Ihe eji achọ mma bụ okwu a na-akpọkarị ụdị uwe eji achọ mma na agịga na eri. E nwere ụdị akwa abụọ: ịcha akwa silk na nku nku. N'ime eriri ma ọ bụ eriri ndị ọzọ ma ọ bụ yarn ndị a na-amịpu ya site na agịga nwere otu ihe eji eme ya na agba ya na ihe eji achọ mma na agba agba ka agịga wee mepụta ụkpụrụ ịchọ mma. Ọ bụ nka ịgbakwunye ụdị mmadụ na n'ichepụta akwa ọ bụla dị adị site na iji agịga na eri. Embroidery, nke nwere akụkọ ihe mere eme ma ọ dịkarịa ala puku afọ abụọ ma ọ bụ atọ na China, bụ otu n'ime ọrụ aka ọdịnala ndị China.
Ihe mkpuchi anyị na-eji osisi, okooko osisi na eserese eserese nke etinyere na mgbidi nwere akụkụ atọ, pillowcases, enyo, wallet, headwears la olu, mgbaaka, ọla ntị, talismans, masks, handkerchiefs, wdg. nke mbụ emeghị icing na achicha ahụ, ọ bụghị naanị na-egosipụta ọkwa Embroidery nke onye na-atụ akwa, na-emekwa ka ihe ndị ọzọ dị iche iche gbakwunyere ọtụtụ iwe. Nkọwapụta site na arụmọrụ dị mma, na-egosipụta ọpụrụiche pụrụ iche.
Embroidery nwere ọnọdụ ime mmụọ, ọ bụ ụtọ nke ndụ, ụcha na nkwekọ na-ekwekọ ekwekọ, enweghị ebe iche echiche na-adịghị agwụ agwụ. Embroidery bụ okwu ịhụnanya, okwu dị nro nke agịga na eri, akwa oghere na-enye mmụọ nsọ, echiche na akụ na ụba mara mma na-achọ ndụ dị egwu, ma wuo ala nrọ na oge uri. Ihe ngwugwu ihe eji eme ihe bu ihe eji edeputa ya, uzo ejiri ya, akwa ogwu, ntuziaka ihe osise zuru ezu. Ngwaahịa agwụchabeghị, ọ dị mkpa iji aka mee, nke kwesịrị ekwesị maka ndị mbido ịmalite, Ndị enyi na-egwuri egwu na agịga na eri maka oge mbụ, echegbula onwe gị, ngwaahịa ndị eji achọ mma nwere nkuzi nkuzi zuru oke dị elu, soro vidiyo ahụ nwere ike mezue, kwe ka ị na-achọ ịchọta ebe dị anya. "Iswa abụghị ụkọ mma, naanị enweghị anya ịchọta mma", ọtụtụ ihe nkịtị, ndị ọrụ na-elegharakarị anya.
Ikekwe ndụ adịghị mma, mana ọ bụrụhaala na enwere ịhụnanya maka ndụ, nwee obi ụtọ ịmepụta obi mara mma, wee jiri nwayọ, ndụ ga - abụ ihe ịchọrọ. Ọ bụrụhaala na obi, ihe ndị nkịtị nwekwara ike bụrụ ihe pụrụ iche, ọ bụrụhaala na ha nwere obi, a ga-enye ndụ nkịtị ihe pụrụ iche ọ pụtara!